Ụzọ kacha mma ị ga-esi na-eme njem nlegharị anya ugwu | Njem akụkọ
Akụkọ Njem | 17/05/2022 13:44 | Emelitere ka 17/05/2022 14:22 | Ecotourism
Ihe dị ka 15% nke ndị bi n'ụwa bi na mpaghara ugwu, mana ọtụtụ ndị ọzọ ndị na-erite uru na mpaghara ndị a nwere akụ na ụba. oghere na na-enye ọtụtụ ihe ntụrụndụ ọzọ: site n'ije dị jụụ ruo ihe omume dabara adaba maka ndị na-akpali mmasị karị, dị ka ịrịgo ma ọ bụ rafting.
Ọ bụkwa eziokwu na imefu ezumike n'ụsọ oké osimiri dị mma, ma mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ka mgbanwe ọdịdị na gburugburu ebe obibi na-eduga na ahụmahụ ọhụrụ. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche mee ihe dị iche maka njem ọzọ gịị chọghị ka uche ha ọmarịcha ugwu ebe ị ga-esi pụọ na Spain nke anyị depụtara ebe a.
Ma eleghị anya, na-enwe a ụbọchị ole na ole na-anọ na a ụlọ dị na Baqueira ma kporie ndụ ya niile? Anyị na-agwa gị.
1 Kedu ebe kacha mma maka njem nlegharị anya ugwu?
1.1 Ndagwurugwu Aran
1.2 Aragonese Pyrenees
1.3 Ugwu Europe
1.4 Ọ bụ Sierra de Gredos
Kedu ebe kacha mma maka njem nlegharị anya ugwu?
Otu n'ime Ebe ugwu kacha mma na Spain bụ Ndagwurugwu Aran, nke bụ akụkụ nke Pyrenees dị ịtụnanya. N'ebe ahụ, ị ​​​​gaghị enwe ike ịmasị ọmarịcha ala mara mma ma na-adọrọ adọrọ, mana ị ga-enwekwa ohere ịme onwe gị obi ụtọ. atụmatụ gastronomic mara mma na ihe atụ omenala pụrụ iche, nke ga-eme ka ị na-atụrụ ndụ mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị bụ n'èzí egwuregwu hụrụ, nke a nwere ike ịbụ ebe kachasị mma ịme ha, ebe ọ bụ na Ọ nwere ụzọ dị iche iche maka njem, na mgbakwunye na mkpọda ski na nnukwu ebe maka rafting, dị ka osimiri Garonne dị.
N'ịbụ nke dị n'etiti Pyrenees, Enwere ọtụtụ ihe omume ugwu dị elu na ebe okike ịme ha. Dịka ọmụmaatụ, nke Posets Maladeta Natural Park na-enye, nke nwere ọtụtụ narị njem nlegharị anya na-enye maka ụtọ niile.
Ọzọ n'ime ugwu ugwu na Spain nke kwesịrị ịkpọ aha bụ Aragonese Pyrenees. A ezigbo mpaghara nke nnukwu glaciers, oke ohia, ọdọ mmiri, osimiri na nnukwu ugwu chọọ ya mma., nke na-eme ka onye ọ bụla na-eleta ya masị ya.
Ọzọkwa, Ị nwere ike ịga ogologo njem site na ogige ntụrụndụ mara mma, Monte Perdido na Ordesa.
El Pyrenees Aragonese bụ otu n'ime ebe ugwu ndị ahụ dị mma maka njem ma na-ebi ndụ dị iche iche, ma na-eme egwuregwu dị oke egwu dị ka canyoning, ịrị elu ma ọ bụ ịga njem, na ọbụna ịnya ugwu na gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na-amasị gị njem nlegharị anya okike na ị bụ onye hụrụ ahịhịa na anụmanụ n'anyagagharịa site na Parque Lacuniacha nwere ike ịbụ ezigbo echiche, n'ihi na n'ebe ahụ, ọ bụghị nanị na ị ga-enwe ike ịmasị ụdị ndị na-eme ka ndụ dị ndụ na gburugburu ebe obibi, ma ị ga-enwekwa ike ịnweta picnic na-atọ ụtọ ma zuru ike ịkwụsị 100%.
Maka ndị hụrụ ugwu na-achọ ịkọrọ ezinụlọ ha oge pụrụ iche. Picos de Europa bụ ebe kpakpando na-aga. N'etiti ọnụ ọnụ ya n'ebe ahụ ọtụtụ ụzọ hiking, dị ka okporo ụzọ Garganta del Cares, nke dị na Picos de Europa National Park. Ụmụaka ga-eju anya mgbe ha na-agafe n'okpuru mmiri mmiri.
Nhọrọ ọzọ na-atọ ụtọ bụ mee ka mgbada nke Sella dị nso na ugwu ugwu na oke osimiri, na-agwụ na Ribadesella.
Ee, ọ dị mkpa ka ị na-ebu ihe mkpuchi anwụ mgbe niile ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị otu n'ime akụkụ, ma ọ bara uru, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ n'ime ha. ịsa ahụ kwesịrị ekwesị mgbe ị na-agafe ebe ahụ na kayak.
Ọ bụ Sierra de Gredos
Sierra de Gredos bụ ọzọ nke ugwu ebe anyị na-akwado iji gaa n'ihu na Spain. Emebere gburugburu ebe obibi ya site na mbuze glaciall, nke butere saịtị ndị pụrụ iche, dị ka Laguna Grande de Gredos na Almanzor a ma ama, nkwụsị abụọ dị ịtụnanya ị na-agaghị echefu.
Ọ bụrụ na ị họrọ Sierra de Gredos ka ebe ị na-aga, ị gaghị enwe ike ịgwụ gị, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe ntụrụndụ na-enye na mpaghara, N'ime ha, omume ịkwọ ụgbọ epeepe, abseiling, zip line na ịnya ịnyịnya dị jụụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na-amasị gị nnụnụ, mpaghara a nwere ụdị dịgasị iche iche nke ị nwere ike ịmasị gị, dị ka udele griffon, ugo mkpirisi mkpịsị ụkwụ na nwa eze, na ndị ọzọ.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, otu n'ime ebe ugwu na-enweghị ike ịgbaghara bụ Andorra. A na-ewere ya dị ka otu n'ime isi njem nlegharị anya nke kọntinent Europe na ebe kacha mma maka njem efu.
N'ebe ahụ ị nwere ike na-eme egwuregwu n'èzí, na-eme njem njem na njem dị iche iche, na mgbakwunye na ịzụ ahịa na isonye na njem nlegharị anya omenala dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-aga na onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ enyi ị nwere ike ime a nleta na Naturlandia Park, ebe ị nwere ike igwu minigolf, na-aga n'elu igwe kwụ otu ebe, na-egwu paintball na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji nwee ụbọchị ntụrụndụ na ntụrụndụ.
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ nwee mmetụta ntakịrị adrenaline, mee ka ịwụ elu bungee na Andorra site na akwa akwa Molleres de Canillo, nke dị ihe karịrị mita 20, bụ nhọrọ kacha mma. N'ihe banyere njem ezinụlọ, Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Valnord ma na-eme otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu na nke na-atọ ụtọ, dị ka ahịrị zip.
Dị ka ị na-ahụ na ị nwere ọtụtụ nhọrọ, ugbu a ị ga-ahọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ecotourism » Ụzọ mgbapụ kacha mma iji nụ ụtọ njem nlegharị anya ugwu